China EEC L3e Yemagetsi Midhudhudhu vagadziri uye vatengesi |Yunlong
Supply Ability:2000 zvikamu / mwedzi
Load :16 zvikamu zve 1*20'GP, 32 zvikamu zve 1*40' HQ.
Gumbo rinotsigira:Pazasi tsigiro gumbo, yokupaka yakagadzikana nyore uye isingashande.
Bhatiri:Wedzera nzvimbo yebhatiri.72V86Ah lithium bhatiri, yakachengeteka, yakareba kureba
Brake system:Pamberi uye mushure medhisiki hombe bhureki, chengetedzo inoperekedza.Kana emergency braking braking, inogona zvakare bhureki zvine hunyoro uye zvakanaka.
Chigaro:Gobvu yakakwira rebound memory siponji, gobvu uye kugadzika kunzwa, inokodzera iyo contour yehudyu, yakasununguka pasina kuneta kugara kwenguva yakareba.
Nyore uye yakanakisa, yemotokari giredhi regiredhi pendi, yakakwirira headlight pamberi dhizaini, yakasununguka chigaro cushion yevanhu vaviri, kuunza zuva rese bhasikoro ruzivo.Kukurumidza kwemvura, kubata kwakasimba.
Mota inoshanda zvakanaka, chengetedza magetsi chengetedza hurefu hutsva.High simba remagetsi friction mota, kubatanidzwa kwezvakasiyana zviwanikwa, uye yemukati chimiro optimization dhizaini kuti uwane hungwaru kuwedzera mota, kuderedza kurasikirwa kwazvino, simba remota simba rakasimba rekuwedzera, kuita kwepamusoro kunoita kuti kukwira kuchengetedzeke. .
HD LCD skrini, mhinduro inokurumidza pasina kukweva mumvuri, yakajeka uye yakagadzikana yemhando yemifananidzo, simba remwenje irradiation ichiri kujeka, mamiriro ekutyaira nekungotarisa, kuitira kuti kufamba kuwedzere kunetseka.
Kumberi nekumashure kunyura hurongwa, kusatya mhirizhonga.Kuwanda kwesefa pothole road vibration, bhasikoro zvakanyanya kugadzikana.
Yakapinza-yemaziso matatu mwenje dhizaini, mwenje wemwenje wakareba, unobata fashoni, rega usatya rima.Bold stylish tail lights.Zvimwe zvinovava, zvinopenya uye zvinopenya, zvinogona kuonekwa kubva kure, zvinobudirira kuvandudza indekisi yekuchengetedza yekutyaira usiku.
Vacuum tire anti-skid dhizaini, brake sensitive, yakasimba grip.Inotora iyo yakakwira mhando rabha, iko kukora kunodzivirira minzwa simbi waya layer, iyo groove dhizaini, inopa yakanaka yekuburitsa mvura yetai.
Hungwaru kudzora kure, ita kuti mota yako ive yakachengeteka.Multi-function remote control anti-kuba alarm, chimiro chiri nyore, kugadzikana kubata, inogona kuvhara motokari nekiyi imwe, kutsvaga motokari iri kure, kusunungura kuvhara nekiyi imwe, anti-teft alarm mabasa.
Mota-level yakawanda-inoshanda anti-slip mubato, kuitira kuti chiyero chekutadza chidzike, kuitira kuti kubata kuri nani, kushoma kuramba, nyatso shandira pamwe nekutanga kwako kwese kukwirisa.
EEC L3e Homologation Standard Technical Specs
86Ah Lithium Bhatiri
20A Pa-board Charger / maawa matanhatu (220V)
Φ240 Dhisiki / Φ220 Dhisiki
CBS mabasa (Combination Braking System)
Nomutsa Ziva kuti zvese zvigadziriso ndezvenyu chete maererano neEEC homologation.
Zvakapfuura: EEC L6e Magetsi Kabhini Mota -X5
Zvinotevera: EEC L7e Electric Cargo Transportation Mota